किन बढ्दैछ सम्बन्धविच्छेदको घटना ? हरेक एक सेकेन्डमा एउटा सम्बन्धविच्छेद ! - Nayapulonline
काठमाण्डाै । दुई व्यक्तिबीचको आपसी सहमतिमा नै विवाह हुन्छ । समाजमा विहेलाई पवित्र बन्धनको रुपमा लिइन्छ र जीवनमा विहे एकपटक मात्र गरिन्छ । पछिल्लो समय समाजमा व्याप्त विभिन्न बानी र संस्कारले वैवाहिक जीवनमा समस्या बढ्दै गएको छ । श्रीमान र श्रीमतीबीच बढेको असमझदारी सम्बन्धविच्छेदमा परिणत हुन धेरै समय नै नलाग्नु नै अहिलेको समस्या हो । सानोतिनो मनमुटावमा नै सम्बन्धविच्छेदको बाटो अपनाउँदा समाजमा सम्बन्धविच्छेदको संख्या निकै बढेको छ ।